Yini okufanele uyifunde? | Izincwadi Zamanje
Ngokusho kwe- I-RAE, i-leer (kusuka Latin)umlenze ') es:
Dlulisa ukubona ngalokho okubhaliwe noma okuphrintiwe, ukuqonda incazelo yabalingiswa abasetshenzisiwe.
Qonda incazelo yanoma iluphi olunye uhlobo lwesithombe esibonakalayo. Funda isikhathi, amaphuzu, imephu.
Qonda noma uhumushe umbhalo ngendlela ethile.
Ekuhlolweni komphakathi nakwezinye izivivinyo zemibhalo, yisho le nkulumo ebizwa ngokuthi isifundo.
Thola ngokukhombisa imizwa noma imicabango yomuntu othile, noma okuthile okufihliwe okwenzile noma okwenzekile. Ungafunda ukudabuka ebusweni bakhe. Usuyifundile ingqondo yami. Ngifunde emehlweni akho ukuthi uqamba amanga.
Ukuqagela okuthile okufihliwe ngemikhuba ye-esoteric. Funda ikusasa emakhadini, emigqeni yesandla, ngebhola le-crystal.
Qhekeza ikhodi yezimpawu zokukholelwa ezeni ukuqagela okuthile okufihliwe. Funda imigqa yesandla, amakhadi, i-tarot.
Kushiwo ngothisha: Fundisa noma uchazele abalaleli babo udaba oluthile ngombhalo.
Kepha ikwenzelani? Kimina kuhamba amazwe angachazeki futhi amnandi uma kukhulunywa ngencwadi yamaphupho, ukubona ubuso nesiphambano sothando lapho ngilahleka phakathi kwamavesi encwadi yezinkondlo, kuyaqonda futhi kuyakhombisa lapho ngizithola phambi kwenhloso yendatshana, ebucayi futhi ebhalwe kahle ...
Ukufunda kusho izinto eziningi kakhulu kunalezo zincazelo eziyi-8 esizichazelwa yi-RAE, futhi kuphela thina esifunda njalo.
Izaga nemishwana ngesenzo sokufunda
Gustave Flaubert, Umbhali waseFrance kulabo abangamazi, usho lo musho olandelayo: "Ziningi izindlela zokufunda, futhi kudinga ithalente elingaka ukuze ufunde kahle!". Wayeqinisile impela! Ngalesi sisho bengifuna ukuqala isifinyezo sezaga eziningana ngesenzo sokufunda.
ezingenalutho Ukuphela kwesenzo sobukhosi esisele naso (U-Antonio Muñoz Molina).
Lapho usugugile, uthanda ukuphinda ufunde ngaphezu kwe- i-leer (IPío Baroja).
Ukubhala kuyindlela ejulile yokwenza i-leer la vida (Fco. Umkhawulo).
Lapho ufunda uku i-leer uzokhululeka kuze kube phakade (UFrederick Douglass).
ezingenalutho ukuthola okuthile okuzoba khona (I-Italo Calvino).
ezingenalutho Incwadi ifundisa ngaphezu kokukhuluma nomlobi wayo, ngoba umbhali, encwadini, ubeke kuphela imicabango yakhe emihle kakhulu (URene Descartes).
Ubumnandi be i-leer kuphindwe kabili lapho uhlala nomunye umuntu owabelana naye izincwadi (UKatherine Mansfield).
Funda i-leer kuyinto ebaluleke kunazo zonke eyake yenzeka kimi empilweni (UMario Vargas Llosa).
Isenzo i-leer, njengesenzo sokuthanda nesenzo ukuphupha, ayisekeli isimo esibalulekile (UJorge Luis Borges).
Ingabe uyavumelana nomunye wabo? Noma mhlawumbe nabo bonke? Yini okufanele uyifunde?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Yini okufanele uyifunde?
Ngivumelana nayo yonke imishwana kodwa ngingasebenzisa eyodwa emphakathini wanamuhla nakubantu abakhanyiselwe abazophuma kuyo yonke imicimbi yomphakathi yaseSpain yethu… Uma ufunda ukufunda uzokhululeka kuze kube phakade.
Kimina, ukufunda kuvula ingqondo nomphefumulo wami kulezo zigemegeme esingasoze saziphila noma ukuthi ngandlela thile siphupha ngokuphila.Ukufunda futhi kuwukuphela kwentambo engiyigcina nesikhathi esedlule sento enhle kakhulu.
Ngivumelana noFrederick Douglass, ukufunda ukufunda kukwenza ukhululeke ingunaphakade, sondla ulwazi lwethu, kusenza sihlakaniphe.